Uyisebenzisa kanjani iCloud, sichaza ukuba yintoni kunye noncedo olunikezayo | Iindaba zeGajethi
Kule mihla, ukuba neenkonzo zefu yinto eqhelekileyo phakathi kwabasebenzisi kwaye ke kubalulekile ukuba siyazi kwaye singazisebenzisa njani kwaye sizisebenzise njani ezi nkonzo ukuze sizuze yonke imihla, nokuba kukugcina amaxwebhu okanye ukufumana isixhobo esilahlekileyo. Kunye I-Apple iCloud Singakwenza oku nokunye okuninzi, ke namhlanje sifuna ukukubonisa ezinye zeenketho esinazo efini kwaye ngaphezulu kwayo yonke indlela yokusebenzisa i-iCloud ukuze ufumane okuninzi kuyo.
Ngokwenene yonke into ilula kakhulu kunokuba ungacinga Kodwa kuyacaca ukuba ayinguye wonke umntu osebenzisa iCloud yosuku lwabo ngenxa yokuba becinga ukuba yinto enzima ukuyisebenzisa okanye idatha yabo inokulahleka. Emva kokutsiba siza kubona ukuba kulula kakhulu kwaye kukhuselekile ukongeza kukhetho olusivumela ukuba siyenze le nkonzo.
1 Okokuqala, yintoni i-iCloud?
2 Ngaba kunyanzelekile ukuba ube nemveliso ye-iPhone okanye ye-Apple ukonwabela iCloud?
3 Iwebhusayithi ye-iCloud kulula kakhulu ukuyisebenzisa
4 Iimfuno eziyimfuneko zokusebenzisa iCloud
5 Sine-5 GB simahla kodwa ixabiso liyahluka ukuba sifuna indawo engaphezulu kwi-iCloud
Okokuqala, yintoni i-iCloud?
Siza kuqala ukusuka ekuqaleni kwabo bangaziyo ukuba yintoni i-iCloud. Le yinkonzo ethi igcina inkampani ngendlela ekhuselekileyo ngenene kwiiseva Zonke iifoto zakho, iividiyo, amaxwebhu, umculo, usetyenziso kunye nazo zonke iintlobo zomxholo, zigcine zihlaziywa kuzo zonke izixhobo zethu. Oku kuthetha ukuba nge-ICloud sinokwabelana ngalo naluphi na uxwebhu, indawo, ifoto, njl. Kunye nabahlobo okanye usapho lwethu ngendlela elula kuba la maxwebhu ahlala efumaneka kuzo zonke iindawo apho sinonxibelelwano lwe-intanethi.
Uyifumana njani i-iPhone yam elahlekileyo
Kwakhona, njengoko besitshilo ekuqaleni, ikuvumela ukuba ufumane isixhobo esilahlekileyo okanye esibiweyo ukuba kunjalo. Ekugqibeleni singathi xa sele siqwalasele eyethu ICloud akhawunti kunye ne-ID yethu ye-Apple sinokwabelana ngokukhawuleza kwaye ngokulula yonke imixholo esiyigcina kuyo. Umzekelo, ukuba wenza icwecwe elitsha kwiifoto kwi-Mac yakho, izakuvela ngokuzenzekelayo kwiifoto zeefoto kwi-ICloud.com kwizikhangeli zeMac kunye neeWindows nakwizixhobo zakho ze-iOS, iApple Watch kunye neApple TV ngokuzenzekelayo.
Ngaba kunyanzelekile ukuba ube nemveliso ye-iPhone okanye ye-Apple ukonwabela iCloud?
Impendulo ethe ngqo nguhayi. Abasebenzisi abaninzi abanayo i-ID ye-Apple kuba abanayo i-iPhone okanye iMac, kodwa enye into ayithathi kwenye. Nge-iCloud sinokufumana i-5 GB yokugcinwa kwamafu simahla nokuba sinesixhobo se-iPhone, i-iPad, iMac okanye iApple, ukuze nabani na abe neakhawunti ye-iCloud eneefoto zakhe, amanqaku, abafowunelwa okanye okufanayo kwilifu le-Apple.
Ngokucacileyo inkonzo iyafumaneka kwiwebhu ngokuthe ngqo I-iCloud inokufikelela nakwisiphi na isixhobo kwaye ujonge amaxwebhu agciniweyo. Into ecace gca yeyokuba ukuba ungumsebenzisi we-Apple une-iPhone, i-iPad, iMac, iApple TV okanye iPod Touch, unezinye izinto eziluncedo njengokukhetha isixhobo okanye ukusebenzisa ICloud Drive ukulayisha nokukhuphela iifayile, wabelane ngazo., uzicime, uzilungiselele kwiifolda, uzinike igama elitsha kwaye uphinde ufumane ezo zisuswe kutshanje kwiindawo ezifanayo ezikwisixhobo sakho.
Iwebhusayithi ye-iCloud kulula kakhulu ukuyisebenzisa
Nje ukuba senze ifayile yethu Iakhawunti ye-iCloud idityaniswe ne-ID yethu ye-Apple yenzelwe ukugcina amaxwebhu, akukho nzima ukuqala ukuyisebenzisa. Ngokufikelela kwi-iCloud.com ngokuthe ngqo, sinokufikelela kuwo onke amaxwebhu esinamafu, nkqu ngokuthe ngqo kwi-Apple suite enamaphepha, iinombolo okanye i-Keynote
Ukusebenzisa iwebhu kufuneka ucofe nje kwi icon esifuna ukusebenza kuyo kwaye sigcine okanye sirhuqe umsebenzi owenziwe ngokuthe ngqo. Singavula usetyenziso lweeNqaku kwaye sibhale isicatshulwa ngqo kuyo, xa sigqibile ukwalatha siphume ngokulula kwi-app kwaye yiyo. Ngoku xa sifikelela kwiakhawunti yethu ye-iCloud kwakhona eli nqaku libhaliweyo ngaphambili, iifoto, amaxwebhu okanye naluphi na uhlobo lomsebenzi owenziwe ngokuthe ngqo kwiwebhu ziya kuvela naphi naSinokwabelana ngalo msebenzi nabanye abasebenzisi abaneakhawunti ye-iCloud.
Ilula kakhulu ukuyisebenzisa kwaye ngaphezulu kwayo yonke inomdla kakhulu kuba injaloijongana nezicelo ezilingana nezo sinazo kuzo zonke izixhobo Iifowuni eziphathwayo, ke kulula kakhulu ukuba usebenze nazo kwaye wabelane ngolwazi phakathi kweenkqubo ezahlukeneyo.
Iimfuno eziyimfuneko zokusebenzisa iCloud
Njengoko sisithi iCloud ifuna i-ID ye-Apple, uqhagamshelo olusebenzayo lwe-Intanethi kunye nesoftware ehlaziyiweyo ukuze isetyenziswe. Ngokucacileyo kukho uthotho lweemfuno ezisisiseko zokusebenzisa i-iCloud ngaphandle kwengxaki kwizixhobo zethu kwaye loo nto kukuhlaziya kuhlobo lwamva olukhoyo lwenkqubo esivumela ukuba sisebenzise imisebenzi yakutshanje ye-iCloud kwaye sibe namava angcono ngokubanzi. Ezona mfuno zisezantsi zezi: IOS 5 kwi-iPhone 3GS, iPod touch (isizukulwana sesithathu ukuya phambili), i-iPad okanye i-iPad mini kwaye une-OS X Lion 3 kwikhompyuter ye-Mac. ç
Kwimeko yokungabinayo iMac singasebenzisa iwebhu okanye iPC nge: Windows 7, Microsoft Windows 10, ukusuka kwi-iTunes 12.7 ukubheka phambili kwi-PC, i-Outlook 2010 ukuya kwi-Outlook 2016 okanye iMicrosoft Edge, iFirefox 45 okanye iinguqulelo zamva, iGoogle Chrome 54 okanye iinguqulelo zamva nje (imo yedesktop kuphela)
Sine-5 GB simahla kodwa ixabiso liyahluka ukuba sifuna indawo engaphezulu kwi-iCloud
I-5 GB yokuqala yendawo kunye nokubhaliswa kwe-ID yethu ye-Apple zikhululekile kubo bonke abasebenzisi abafuna ukugcina amaxwebhu abo, iifoto okanye iifayile kwi-iCloud. Sele ndiyithethile le nto, kufuneka kuthiwe ixabiso alibizi kodwa ngokokufuna kwethu indawo ethe kratya kodwa iya kuxhomekeka kakhulu kwiimfuno zomntu ngamnye kuba kunokwenzeka ukuba ngezo 5Gb zabanye abasebenzisi zanele.
Izicwangciso zokugcina ilifu iApple esinika zona ukusuka kwi-5 GB simahla ukuya kwi-2TB yokugcina i-50 GB okanye i-200 GB. Ukongeza, iApple ibonelela ngamathuba okwabelana ngezi zicwangciso zokugcina i-200 GB kunye ne-2 yosapho kunye nosapho, kodwa ezi akhawunti kufuneka zinxulunyaniswe. Amaxabiso e-ICloud ngenyanga athi: I-50 GB nganye I-0,99 euro, i-200 GB ye-2,99 euro kunye ne-2 TB ye-9,99 euro.
Khumbula ukuba ezi zicwangciso zinokulungiswa nanini na ufuna kuba azinasigxina, ingxaki kukuba kuyakufuneka sibenayo indawo kwenye indawo yokugcina idatha ukusukela xa sirhoxisa inkonzo yonke into egciniweyo iyanyamalala. Le yindlela elungileyo yokwenza gcina zonke iintlobo zamaxwebhu efini kwindawo ekhuselekileyo, esebenzayo nenokufikeleleka naphi naUkongeza, ukhetho lokufikelela kwidatha, iifoto kunye nabanye naphina kwenza ukuba ibe lolunye ukhetho olufanelekileyo lokugcina yonke idatha yethu namhlanje. Ayikhathazi ukuba ne-backup ebaluleke kakhulu kwi-hard drive okanye efanayo, kodwa kumgaqo akukho ngxaki yokulahleka kwedatha ngolu hlobo lweenkonzo ukuze uphumle ngokulula.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Tutorials » Uyisebenzisa kanjani iCloud